Bichar Khabar » सन्दिपले दिल्लीकाे फस्ट ११ मा परेर अाइपीएल खेल्न पाउँलान् ?
सन्दिपले दिल्लीकाे फस्ट ११ मा परेर अाइपीएल खेल्न पाउँलान् ?
23 Mar 2018 02:03:01 PM | No Comments
दिल्लीले बोली लगाएपछि १७ वर्षे सन्दिप आईपीएलमा आवद्ध हुने पहिलो नेपाली क्रिकेटर बनेका छन् तर उनी फस्ट ११ मा परेर खेल्न पाउँछन् कि पाउदैनन् भन्ने सबैकाे चासाेकाे बिषय बनेकाे छ । जर्सी सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि सन्दिप र दिल्लीका सीईओले तर्फ सबैकाे ध्यानाकर्षण भएकाे थियाे ।आईपीएलको अक्सनमा दिल्ली डेयरडेभिल्सले सन्दिपलाई २० लाख भारुमा अनुबन्ध गरेको थियो । उनी आइपीएलमा आवद्ध हुने पहिलो नेपाली क्रिकेटर हुन् ।दिल्ली डेडरडेभिल्समा सन्दिपले एक नम्बरको जर्सी लगाउनेछन् । यो उनी आफैंले रोजेको नम्बर हो ।
सन्दिप भन्छन्, ‘हरेक खेलाडीको चाहना हुन्छ कि मैले खेले पनि नखेले पनि टिमले जित्नुपर्छ । मैले मौका पाएँ भने त्यो राम्रो हुन्छ ।’दिल्लीका सीईओ डुआले सन्दिपलाई लिएर नेपालीहरू उत्साहित भएकाे जानकारी दिएका थिए ।
२७ तारिखबाट दिल्लीको क्याम्प सुरु हुनेछ र सन्दिपले अभ्यास खेलहरु खेल्न पाउनेछन् । उनले अघि भने, ‘त्यहाँ राम्रो गर्न सक्यो भने नखेल्ने भन्ने छैन । तर, मुख्य कुरा टिमको जित हो ।’साथै कसलाई खेलाउने भन्ने निर्णय प्रशिक्षक र कप्तानले गर्ने भएकाले आफूले भन्न नमिल्ने उनले बताए । दिल्लीमा उनले धेरै सिनियर खेलाडीहरुसँग काँधमा काँध जोडेर खेल्ने मौका पाउनेछन् । यसबाट पनि उनले धेरै कुरा सिक्न सक्छन् ।
आईपीएल टिम दिल्ली डेडरडेभिल्सले काठमाडौं आएर सन्दिप लामिछानेको जर्सी सार्वजनिक गरेको छ ।राखेप सदस्य सचिव केशव विष्टको उपस्थितिमा दिल्लीका सीईओ हेमन्त डुआले जर्सी हस्तान्तरण गरका थिए ।सीईओ डुआका अनुसार दिल्ली डेडरडेभिल्सले झण्डै एक वर्षदेखि सन्दिपलाई पछ्याइरहेको थियो ।
डुआले भने टिमका प्रशिक्षक रिकी पोन्टिङका साथै गौतम गाम्भीरले सन्दिपकाे बलिङ भिडियाे मनपराएरै उनलाई टिममा आवद्ध गर्ने निर्णय गरेका हाैँ ।सन्दिप नेपालको २५ नम्बरको जर्सी लगाउँछन् । यो उनले आफ्नो भान्जीको जन्मदिन हो र उनलार्इ डेडिकेट गरेर २५ नम्बर रोजेका थिए । दिल्लीमा पनि उनले त्यही नम्बर चाहेका थिए ।तर त्याे नं भने अर्काे खेलाडी रवडाले लिइसकेका थिए ।